Horudhac: Galatasaray vs Real Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Champions League) – Gool FM
(Istanbul) 22 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Galatasaray ayaa kulan ka tirsan Champions League waxa ay caawa ku soo dhoweynaysa garoonkeeda naadiga reer Spain ee Real Madrid.
Los Blancos oo ay dhowr ciyaaryahan dhaawacyo kaga maqan yihiin kulankan ayaa doonaysa inay caawa guul ku soo gaarto dalka Turkiga oo ay booqanayso, kulankan oo qeyb ka ah Guruubka A ee Koobka Horyaallada Yurub.
Galatasaray iyo Real Madrid ayaana Guruubkan A ka hoggaaminaya qeybta hoose iyagoo leh kaliya min hal dhibic.
Garoonka: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu
Kooxda Galatasaray ayaa waxaa dhaawacyo kaga soo kabsanaya taam ahaanshahooda dib u helay ciyaartoy dhowr ah oo muhiim ah oo uu ku jiro weeraryahankii hore ee Atletico Madrid Radamel Falcao.
Sofiane Feghouli ayaa sidoo kale tartan la galaya waqtiga si uu u caddeeyo caafimaadkiisa.
Emre Mor iyo Florin Andone waxay si fiican uga dhex muuqdeen Sabtidii boosaska ay dheelayeen Feghouli iyo And one, waxaana laga yaabaa in loo yeero oo lagu soo bilaabo safka hore ee kulanka caawa.
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa waxaa haysta dhibaatooyin dhab ah ka hor kulanka ay caawa u safrayaan Turkiga., qaabka goolka ee Thibaut Courtois ayaa wali ah arrin wali taagan, halka maqnaanshaha Gareth Bale iyo Lucas Vazquez ay ka dhigeyso inuu doorasho sameeyo.
Isco, James Rodriguez iyo Luka Jovic ayaa dhammaantood wada bandhig fiican, waxaana laga yaabaa inuu Zidane ku soo bilowdo ugu yaraan labo ka mid ah xiddigahan kulanka muhiimka ah ee Champions League caawa.
Eden Hazard, Dani Carvajal iyo Raphael Varane ayaa dhammaantood ku soo laaban doona safka hore kulankan, Toni Kroos ayaana sidoo kale diyaar ah kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac muruqa ah.
>- Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday kooxda Galatasaray tartammada oo dhan.
>- Galatasaray ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso lix ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay UEFA Champions League.
>- Kooxda Real Madrid ayaa guuleysatay lix ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la dheeshay Galatasaray tartammada oo dhan.
>- Naadiga Galatasaray ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay UEFA Champions League.
>- Real Madrid ayaa laga dhaliyey ugu yaraan labo gool saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay tartanka UEFA Champions League.
RASMI: Liiska musharaxiinta abaal-marinta Goolhaayaha ugu fiicnaa aduunka sanadka 2019 oo la shaaciyay